Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 21-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Liverpool ee Champions League – Gool FM
Dajiye April 12, 2021
(Madrid) 12 Abriil 2021. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa shaaciyay liiska 21-ka ciyaartoy ee uu ku shaqayn doono kulanka Liverpool ee lugta labaad wareega Siddeed dhmaadka tartanka UEFA Champions League.
Zinedine Zidane liiska uu u magacaabay xiddigihiisa Real Madrid kulanka ay habeenka Arbacada booqaan doonaan kooxda Liverpool waxaa dhanka weerarka ka hoggaaminaya xiddigaha Karim Benzema, Marco Asensio, iyo Vinícius Júnior.
Laakiin taasi badelkeeda waxaa Liiskan uu ku dhawaaqay tababare Zidane ka maqan xiddigaha kala ah, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Eden Hazard, iyo Dani Carvajal, balse Zidane ayaa heli kar dhamaan adeegyada xiddigahiisa kale uu ku ciyaaray kulankii lugta hore.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ay kala qeyb galayso kulanka Liverpool ee lugta labaad wareega siddeed dhamaadka tartanka UEFA Champions League:
Bayern Munich oo weerar ku ah Liverpool... (Yaa bartilmaameed u ah Bavarians?)
“Maalin uun ayuu ku guuleysan doonaa Ballon d'Or.” – Hans Flick oo ammaanay Kylian Mbappé